KDEApps5: KDE Nharaunda Zvikumbiro zveMitambo | Kubva kuLinux
KDEApps5: KDE Nharaunda Zvikumbiro mumunda wemitambo
Linux Tumira Kuisa | 15/09/2021 06:00 | Yakagadziridzwa ku 20/09/2021 18:23 | Applications, GNU / Linux
Nhasi, isu tinoenderera ne cheshanu «(KDEApps5) » kubva pane akateedzana ezvinyorwa pa "KDE Nharaunda Mapurogiramu". Uye ino nguva isu tichagadzirisa kunyorera kwe munda wemitambo, kwete kwaari chete kutandara zvine hutano asi kwaari kudzidza.
Kuti uite kudaro, ramba uchiongorora yakafara uye iri kukura katarogu ye mahara uye akavhurika mafomu yakagadzirwa navo. Nenzira yakadaro, kuti uenderere mberi nekuwedzera ruzivo pamusoro pavo kune vese vashandisi mune GNU / Linux, kunyanya avo vanogona kunge vasiri kushandisa «KDE Plasma » Chemhondoro «Desktop Nzvimbo» chikuru kana chega.
KDEApps1: Kutanga Kutarisa kuKDE Nharaunda Zvikumbiro
Kune avo vanofarira kuongorora yedu yapfuura 4 zvinyorwa zvine chekuita nemusoro wenyaya, unogona kubaya pane zvinotevera zvinongedzo, mushure mekupedza kuverenga bhuku iri:
KDEApps4: KDE Nharaunda Zvikumbiro zveInternet Management
KDEApps3: KDE Nharaunda Zvikumbiro zveGrafiki Management
KDEApps2: Kuenderera mberi nekuongorora iyo KDE Nharaunda maapplication
1 KDEApps5: Game Mapurogiramu ekunakidzwa uye Kudzidza
1.1 Mitambo - KDE Zvishandiso (KDEApps5)
1.1.1 Wepamusoro gumi maapp
1.1.2 Mamwe maapplication aripo
KDEApps5: Game Mapurogiramu ekunakidzwa uye Kudzidza
Mitambo - KDE Zvishandiso (KDEApps5)
Munzvimbo ino ye Mitambola "Nharaunda yeKDE" yakagadziriswa zviri pamutemo Zvishandiso zvishanu yatichazotaura nekutaura, zvinyorwa uye zvakapfupika, gumi rekutanga, uyezve tichataura gumi nemana asara:
Wepamusoro gumi maapp
Hondo yehondo: Mutambo wezvikepe zvinonyura. Ngarava dzinoiswa pabhodhi rinomiririra gungwa. Vatambi vanoita majana ekuyedza kusvika pazvikepe zvevadzivisi vavo vasingazive kwavanowanikwa. Mutambi wekutanga kuparadza zvese zvemuvengi wake zvikepe zvinokunda mutambo.
bhomba: Mutambo wekuvaraidza kune mumwe mutambi. Mutambi arikupinda mumaguta akasiyana siyana mundege iyo inobhururuka ichidzika nekudzika. Chinangwa chemutambo ndechekuparadza zvese zvivakwa kuti zvienderere mberi kune inotevera nhanho. Chikamu chega chega chinowedzera kuoma nekumhanya kwendege uye nekukwirira kwezvivakwa zvinowedzera.
Bovo: Ndiwo mutambo wevatambi vaviri akafanana neGomoku (kubva kuJapan 五 目 並 べ, zvinoreva kuti "mapoinzi mashanu"). Ivo vaviri vanopikisa vanochinjana kuisa yavo pikogiramu pabhodhi mutambo. (Iyo inozivikanwa zvakare se: "Unganidza shanu", "Shanu mumutsara", "X naO" kana "Zero nemichinjiko").
Granatier: Iyo idombo reiyo yakasarudzika mutambo Bomberman, rakafuridzirwa nebasa reClanbomber dombo.
Kajongg: Iyo yekare Chinese bhodhi mutambo wevatambi vana. Kajongg inogona kutambwa nenzira mbiri dzakasiyana: kutamba nemaoko uye kushandisa Kajongg yezvibodzwa uye kuverenga. Kana iwe unogona kushandisa Kajongg kutamba uchipesana nechero mubatanidzwa wevanhu kana muchina vatambi.
Kapman: Iyo idombo yemutambo unozivikanwa Pac-Man. Mariri, iwe unofanirwa kumhanya kuburikidza neiyo maze kuti udye ese mapiritsi pasina kubatwa nechipoko. Nekutora anounza simba, Kapman anowana kugona kudya zvipoko kwemasekondi mashoma. Kana mapiritsi nemabhureki apera padanho rimwe chete, mutambi anoendeswa padanho rinotevera iro rinenge riine kumhanyisa mutambo.
KAtomic: Ndiwo mutambo unonakidza wezvedzidzo wakanangana nema molecular geometry. Iyo inoshandisa akareruka maviri-mativi maonero eakasiyana makemikari zvinhu.
KBlackbox: Iyo yekuvanda nekutsvaga mutambo une grid yemabhokisi umo muchina wakavanza mabhora akati wandei. Nzvimbo yemabhora aya inogona kuderedzwa nemirairi yekupfura mumabhokisi.
KBlocks: Iyo diki diki kudonha mutambo. Pfungwa ndeye kurongedza matombo anodonha kuti agadzire mitsara yakatwasuka isina maburi. Kana tambo yapera inobviswa, uye imwe nzvimbo inowanikwa munzvimbo yekutamba. Kana pasisina imwe nzvimbo yezvidhinha kudonha, mutambo wapera.
KBounce: Ndiwo mumwe mutambi arcade mutambo wakafanana nepuzzle. Inotambirwa pamunda, yakakomberedzwa nemadziro, iine mabhora maviri kana anopfuura anofamba achienda nemunda uye obva pamadziro. Mutambi anogona kugadzira madziro matsva nekuderedza saizi renzvimbo inoshanda. Chinangwa chemutambo ndechekuzadza ingangoita 75% yemunda kuitira kuti uenderere padanho rinotevera.
Mamwe maapplication aripo
Mamwe maapplication akagadzirwa mune izvi chiyero cheMitambo na "Nharaunda yeKDE" Ndizvo:
KBreakOut: Mutambo wakafanana neBreakout.
KDiamond: Tic-tac-chigunwe bhodhi mutambo.
KFourInLine: Makumi mana mumutsara bhodhi mutambo.
KGoldrunner: Mutambo nezve Kutsvaga goridhe, kunzvenga vavengi nekugadzirisa mapuzzle.
Kigo: Bhodhi mutambo «Enda».
Kuuraya: Strategic mutambo nemarobhoti.
Kiriki: Mutambo wedhaice wakafanana naJahtzee.
KJumpingCube: Mutambo wekukunda kwenzvimbo.
Klickety: Bhodhi mutambo.
KMines: Mutambo wakafanana neMinesweeper.
KNetWalk: Network yekuvaka mutambo.
Knights: Chess mutambo.
Kolf: Minigolf mutambo.
Kollision: Mutambo wakapusa kunzvenga mabhora.
Konquest: Space nzira mutambo.
KPatience: Kushivirira kadhi mutambo.
KReversi: Reversi bhodhi mutambo.
KShisen: Mutambo weTile wakafanana neShisen-Sho Mahjongg.
KSirk: Nyika yekutonga zano mutambo.
KSnakeDuel: Mujaho mu hyperspace.
KSpaceDuel: Arcade mutambo mutambo.
KSquares: Unganidza iwo madota kuti ugadzire mativi.
KSudoku: Mutambo weSudoku.
Kubrick: Mutambo weD 3D unobva pane cube yaRubik.
LSkat: Mutambo wekadhi wechiGerman.
Ruvara mitsara: Tactic mutambo.
Palapeli: Puzzle mutambo.
Mbatata baba: Dhirowa mutambo wevana.
Picmi: Mutambo wemafungiro.
Muchidimbu, tinodzidza kuti izvi kudzokorora kwechishanu "(KDEApps5)" yezviripo zvirimo mashandisirwo eiyo "Nharaunda yeKDE", yatino taura neavo ve chiyero cheMitambo, yanga ichinakidza uye ichibatsira vazhinji. Uye shandira kushambadza uye kushandisa zvimwe zveizvi Apps nezve dzakasiyana siyana GNU / Linux Distros. Uye izvi zvakare, zvinobatsira mukushandiswa uye kuwanda kweakadai akasimba uye anoshamisa software yekushandisa akanaka sei uye anoshanda nesimba Linuxera Nharaunda inotipa tese.
Tinovimba kuti bhuku iri richabatsira chose «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukuvandudza, kukura uye kupararira kweiyo ecosystem yezvishandiso zviripo «GNU/Linux». Uye usamire kuigovana nevamwe, pane ako aunofarira mawebhusaiti, chiteshi, mapoka kana nharaunda dzemasocial network kana mameseji masystem. Pakupedzisira, shanyira peji redu repamba pa «KubvaLinux» kuongorora dzimwe nhau, uye kujoina yedu yepamutemo chiteshi Teregiramu kubva kuDesdeLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » KDEApps5: KDE Nharaunda Zvikumbiro mumunda wemitambo
Fairphone + Ubuntu Kubata: Hardware uye Software mukufarira yakavhurwa sosi
Bespoke Synth, yakavhurwa sosi modular software kurira synthesizer